छोरी जन्मिदाको त्यो दिन !
आज हाम्री प्राणप्रिय छोरी एन्जील तीन वर्ष पूरा पुगेर चौथो वर्षमा लाग्दैछिन् । हिजो झैं लाग्छ, उनी जन्मेको, कति छिटो तीन वर्ष पार गरि सकिन सम्झेर ल्याउँदा अनौठो अनूभुति हुन्छ । मलार्इ सम्झना छ, उनको पहिलो वर्षको जन्मदिनको खास उत्साहप्रद रहेन, सायद म र श्रीमतीबिच केहि त्यस्तै असमझदारी रहेको हुनुपर्छ । तर दोश्रो वर्ष पार गरि तेस्रो वर्षमा लाग्दा भने छोरीको जन्मदिन भने जसरी मनाउने ब्यवस्था गरेका थियौं । र, यो उनको जन्मदिनको तेस्रो उत्सब म उनीसँग छैन, मन भरिएर आएको छ । जेहोस छोरीसँगका केहि पलहरू सम्झेर उनको जन्मोत्सब मनाउने प्रयास गरेको छु ।
ठिक तीन बर्ष पहिले आजकै दिन बिहानीपख १ बजेतिर मलार्इ श्रीमतीले कोट्याउँदै भनिन् – सुन्नुन मलार्इ त पेट दुख्न थाल्यो । मैले उनलार्इ पहिले नै सजग गराएको थिएँ कि हल्का पेटमा केहि पीडा भयो भने मलार्इ भनि हाल्नु, बागलुङ्बाट गाडी मगाउन सजिलो पर्छ । सायद त्यही भएर होकी सानुले मलार्इ कोट्याएको ! म बिस्तराबाट बिध्यूतिय गतिमा उठेँ र झटपट आमालार्इ उठाएँ । आमा अलि बिरामी भएका कारण हामीसँग बागलुङ जाने अवस्था नरहेकाले म ठूली आमालार्इ बोलाउन ठूली आमाकोमा गएँ । ठूलीआमालार्इ लिएर आएपछि, बागलुङमा रहने मेरा बुढा मामाली खलकका मामा रामु खड्कालार्इ तुरून्तै फोन गरेँ र रत्नेचौर आउनका लागि अनुरोध गरेँ । मामाले एकैछिनमा हिड्ने जानकारी गराउनु भयो । अलिअलि लज्जाबोध पनि भएको थियो । खासमा हामी दुवैजना श्रीमानश्रीमतीलार्इ छोरी गर्भमै भएदेखि के लागेको थियो भने पहिलो सन्तान जन्माउनका लागि हामी परिपक्व भैसकेका छैनौं । हुनपनि बहुदल आउँदाको महिनाकी मेरी श्रीमती जो भर्खर १८ वर्ष पार गर्दै थिइँन भने म २२ वर्षको थिएँ ! घर गाउँमा पढ्न लेख्नमा लगाब भएको मेहनती केटो मानिएका हुनाले मलार्इ हल्का नैतिक प्रश्न हुन आउँथ्यो यो तर मेरो घर मास्तिरको एक जना भार्इ १७ बर्षकै उमेरमा फाल्गुण महिनामै छोरीको धनी भैसकेकाले 'डिफेन्सिभ' जवाफ चाँहि थियो मसँग ! यसरी लाजले अलिकति पानीपानी हुँदै, र एक असल श्रीमानको कुशल जिम्मेवारी निभाउँदै श्रीमतीलार्इ समातेर म तल मोटर बाटोसम्म ओर्लेको ताजा याद आइरहेछ, आज !
बागलुङ्बाट गाडि लिएर मामा आउँदा बिहानीपख ३ बजेको हुनुपर्छ । यताउता गर्दा हामी ४ बजेतिर मात्र गाडि चढेर बागलुङ अस्पतालतिर जान तयार भयौ । बाटोभरी कोहीसँग केहि पनि बोलिनँ । मलार्इ मनमन खुब शरम लागिरहेथ्यो । मनमा अनेकन प्रश्न खेलिरहेथेँ । छोरा हुने कि छोरी ? कतै बिकलाङ्ग पो हुने हो कि ? फेरि अचेल अचम्म अचम्मका बच्चाहरू पनि जन्मिन्छन् कतै त्यस्तै अचम्मको भैदियो भने त मेरो हाल के हुने होला ? थुप्रै तानाबाना मनमा खेल्न थाले । यी अनेकन तनाब र उत्साहका बिच बागलुङ अस्पताल पुगेको थाहै भएन् । सानुलार्इ गाडीबाट झारेर सिधैं प्रस्तुती कक्षमा राखियो । सुत्केरी ब्यथा लागेर त्यहाँ आएका केहि महिलाहरू थिए, तीनका साथमा उनीहरूका लोग्ने थिएनन, धेरैका साथमा कि त आमा थिए वा सासु । सप्पै स्वास्नीमान्छेहरू छन् जिस्काएर एक गाँस बनाइदेलान कि भन्ने मनमा ठूलो भय थियो, तर बुर्तिबाङबाट आफ्नी गर्भवती श्रीमती लिएर आएका एकजना अधबैशे दार्इलार्इ भेटेपछि भने मन ढुक्क भयो ! तैपनि, धन्न कसैले जिस्काएन !
बिहानीपख पनि भयो, बच्चा हुने सुरसारै थिएन । यस्सो श्रीमतीलार्इ हेरेको खिस्स हाँस्छिन् । छेउमै बस्नुभएकी ठूलीआमाले भन्नु भयो, बल्ल दुर्इ घर खुलेको छ रे, सिस्टर्नीले भनेको ! बच्चा जन्मिन कति घर खुल्नुपर्छ रे खास ? जिज्ञासा राखिसकेपछि अलिकति लाज लागेको अनुभूति भयो । ठूलीआमाले कुन्नी कति भन्नुभयो अहिले हेक्का भएन । तर मलार्इ यत्ति थाहा छ, त्यो नाथे दुर्इ घर खोलिनु कुरा बच्चा जन्मिनका लागि एकदम अपर्याप्त हो । मेरो पाको दिमागले के हेक्का राख्यो भने, म बाबा बन्नका लागि केहि घण्टा अझ अरू प्रतिक्षा गर्नु जरूरी छ !
अब मेरो खास ड्युटी शुरू भएको थियो । सुत्केरी हुन तयार मेरी श्रीमतीका लागि तातो मासुका चोक्टा र झोल तयार पार्न लगाउनु थियो । अस्पताल अगाडिको होटलमा त्यसको पनि बन्दोबस्त गरिसकेको थियो । तर १२ बज्यो, १ बज्यो, २ बज्यो बच्चा जन्मिने त केहि चालिमाली नै छैन । एक मन त श्रीमतीसँग रिस पनि उठ्यो । कति ढिला गरेको होला ? तर यो उनको पहुँचको कुरा पनि थिएन । तसर्थः धैर्यतापूर्वक त्यो सुनौलो घडिको प्रतिक्षा गर्नु बाहेक हामीसँग अरू कुनै बिकल्प थिएन् ।
अपरान्ह तीन बजेको समयमा सानुलार्इ नर्सहरूले भित्र लगे । केहिसमय पछि उनले मेरो माग गरिछिन् । एकजना नर्सले मलार्इ बोलाउन आइन, मलार्इ श्रीमतीको नजिक जान डर लागिरहेको थियो, किनकी सुनेको थिएँ – प्रसुतीको समयमा श्रीमतीहरू ब्यथालार्इ खप्न नसकेर आफ्नो अगाडि श्रीमानलार्इ देखे भने 'मलार्इ यस्तो ब्यथा खप्न पार्ने तैं होइनस् ?' भनी झम्टिन्छन् रे ! कसै – कसैले चिथोरे बेहालै पारिदिन्छन् रे ! रे को कुराले मेरो सातोपुत्लो लगिदिएको थियो त्यसैले पहिला त मैले प्रसुती कोठामा जाने साहस गर्नै सकिनँ तर पछि श्रीमतीको निरन्तरको बोलावट पछि मलार्इ जान कर लाग्यो । म भित्र गएँ, तर उनलार्इ त्यति धेरै पीडामा देख्न सकिनँ । र, उनलार्इ सम्भार्इबुझार्इ गरी म बाहिरै फर्के ! म बाहिर निस्केको केहि समय पछि, अर्थात अपरान्ह ३ बजेर ३७ मिनेट जाँदाको समयमा, नवजात शिशुको रूवार्इले हल गुन्जियो ! मसँगै भएकी ठूली आमाले अड्कल लगाउनु भयो- आवाज छोरीको जस्तो छ, घरमा लक्ष्मी भित्रिन् ! मैले ओठे जवाफ फर्काए, हैन आवाज त छोराको जस्तो छ ! म छोरी चाहने मान्छे मैले त्यसबखत त्यो रूवार्इको छोराको हुनुपर्छ भनेर किन जिकिर गरेँ हुँला आज पर्यन्त मलार्इ आश्चर्य लागिरहेछ । त्यस हुनाको कारण मैले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
केहि समय पछि एकजना नर्सले शिशु मेरो ठूलीआमालार्इ थमाउँदै भन्नुभयो – लक्ष्मी भित्रेकी छिन् । एकछिन पछि ठूलीआमाले मलार्इ दिदै भन्नुभयो – लौं, छोरी समात ! यस्सो नजर लगाए, सबै कुरो मै उठेर आएको जस्तो लाग्यो । ठूलीआमाले पनि त्यसै भन्नुभयो, छोरी त दुरूस्तै तिमी जन्मेकी छे ! तर नाक चाँहि ठ्याक्कै सानुको जस्तो ! मंगोल नाक । हुन त एकदिने शिशुको मुहार हेरेर को जस्ति छिन् ? कस्ती छिन् ? अनुमान लगाउनु ब्यर्थै मात्र हो, तर जेहोस् मलार्इ लागेको कुरो सप्पै मजस्तो नाक चाँहि उनको आमाको जस्तो भएको कुरा अझसम्म मेरी छोरी देखेकाहरूले त्यसै भन्दा चाँहि मेरो अनुमान सहि नै साबित भएको छ !
फेवातालमा बाबासँग रमाउँदै एन्जील
केहि छिन पछि म मिष्ठान्न भण्डारमा गएँ, र सानुको प्रसुतीमा संलग्न नर्सहरू तथा त्यहाँ प्रसुतीका लागि आएका गर्भवती र उनीहरूका कुरूवा सबैका लागि एक एक वटा लालमोहन लिएर हर्षबढाइ गरेँ । अब मेरो खास काम शुरू भयो, अगाडि नै तयार पार्न भनेको मासुको रस लिन गएँ । रस खाइसकेपछि सानुले पिसाब लागेको बताएपछि उनलार्इ पिशाब फेर्ने ब्यवस्था पनि गरियो । तर बिडम्बना सालका केहि टुक्राहरू पाठेघरमै रहेकाले उनलार्इ रक्तश्राव भयो । हतार हतार उनलार्इ फेरि प्रसुति कक्षमा लगियो, म पनि भित्रै गएँ । उनलार्इ निकै असह्य भएछ, बरर आँशु झारिनँ । मैले आफूलार्इ रोक्न सकिरहेको थिइँन । मलार्इ त्यहाँ बस्नै मन लागिरहेको थिइँन । भावनात्मक रूपले म एकदम कमजोर मान्छे मलार्इ त्यहाँ बाट कसरी बाहिर आउँ झैं लागिरहेथ्यो, डाक्टरले भने तुरून्त दुर्इपिन्ट रगतको ब्यबस्था गर । म हुत्तिएर बाहिर आएँ ।
ब्लड बैङ्कमा पुगेको बि पोजेटिभ समूहको जगेडा रगत रहिन रहिछ, मेरो रगत चेक गरेको परिणाम उल्टो निक्ल्यो ! मेरो रगत ए पोजेटिभ पो रहिछ ! अब तुरून्तै आवश्यक एक पिन्ट रगतका लागि दौधदुप शुरू भयो । पहिला रक्तदान गरेकाहरू सुची हेरियो, बि पोजेटिभ समूहका केही दाताहरू रहिछन् । तर कतिको फोन उठेन, कतिकोमा सम्पर्क हुन सकेन । बल्ल बल्ल एउटालार्इ कल लाग्यो, उनले रक्सी पिएर भर्खर सुतेका रैछन् । फोन लागेको पनि ब्यर्थै भयो ! ममा एकदम छटपटी बढ्यो । अस्पताल दौडेर गएँ, गेटमै श्रीमती रोइरहेको आवाज सुनेँ । पाइला त्यहि रोकिए, म भित्र जान सकिनँ ! आमाले भनेको सम्झेँ, अप्ठ्यारो परेको बेला भगवान सम्झनु पर्छ । मैले पनि त्यसै गरेँ । र, मनमन मेरी सानुलार्इ यो खालको पीडाबाट मुक्ति दिलार्इदेउ भनि बागलुङ् कालिकालार्इ एउटा कालो बोकाको भाकल गरेँ । म एकदमै अतालिएको थिएँ । म यति निरीह थिएँ कि ब्यक्त गर्नलार्इ मसँग शब्द अभाव छ । त्यसपछि, मेरा पाइला फेरि ब्लड बैङ्क तर्फै मोडिए । अन्तिममा एक जना बागलुङकै नाता पर्ने भाइको पनि रक्तसमूह उहि भएको थाहा भएपछि उनलार्इ डाक्ने काम भयो । उनी हतार हतार आए र रगत दिए । यसरी सानुको रगतको अभाव त्यस रातलार्इ पूरा भयो । अझै एक पिन्ट रगत आवश्यक थियो । भोलीपल्ट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत एक ने.बि.संघका बिधार्थी नेता आएर त्यो अपुग रगत दान गरे । मेरो मन ढुक्क भयो ।
श्रीमतीले अनुभूत गरेको त्यो अभूतपुर्व पीडा पछि मैले निर्क्यौल गरेँ – यिनै छोरी हाम्री पहिलो पनि र एकमात्र सन्तान हुनेछिन् । यसरी एउटा उत्साह र केहि तनाबका बिचमा जन्मेकी हाम्री प्यारी छोरी एन्जिल तीन वर्ष पूरा भएकी छिन् । उनी जन्मेपछि प्रायशः म उनीसँगै छु । प्रायः सानु खाना पकाउनमा ब्यस्त हुने हुँदा मेरो भागमा चाँहि छोरी हेर्ने पर्थ्यो । त्यसैले छोरी प्रायः मेरै हातमा हुन्थिन । अहिले म छोरीसँग नभएको ७ महिना भैसकेको छ । मेरो छोरीसँग फेरि नियमित रूपमा खेल्न, सँगै घुम्न र झगडा गर्न अझैपनि ३ महिना बाँकी छ । नढाँटेर भन्नुपर्दा वास्तवमा मैले मेरी छोरीको जन्मोत्सब भन्दा पनि उनीसँगका प्रत्येक पलहरू 'मिस' गरिरहेछु ।